निरोगी खसी बोका छुट््याउन रङ्ग लगाउन शुरु
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७६-०६-१३ | ९१० ७
अहिलेको अनुगमन पर्व लक्षित हो, यसलाई मौसमी हुन दिँदैनौं — उपमेयर खड्गी श्रेष्ठ
काठमाडौं । बाहिरबाट दशैका लागि काठमाडौं ल्याइएका निरोगी खसी—बोका, भेडा—च्याङ्ग्राको सिङ्मा हरियो रङ्ग लगाउन शुरु गरिएको छ । सोमबार बिहान महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ नेतृत्वमा पशु सेवा बिभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति बिभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागलगायत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित कलंकी खसी बजार पुगेर रङ् लगाउन शुरु गरिएको थियो । त्यस क्रममा उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठ, पशु सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. बंशी शर्मा र वडा १४ की अध्यक्ष शोभा सापकोटाले च्याङ्ग्राका सिङ्मा हरियो लगाउनुभएको थियो । यसपछि भने पशु चिकित्सकले मात्र सिङ्मा रङ् लगाउन पाउँँछन् । पर्वमा खाइने मासुजन्य परिकारलाई स्वस्थ्य बनाउन महानगरपालिकाले पशु स्वास्थ्य जाँच र बजार अनुगमनलाई एकैसाथ तीब्र बनाएको हो । यसै क्रममा कलंकीको चौपाया विक्री केन्द्रको निरीक्षण पनि गरियो ।
अनुगमनबाट बजारको अवस्था र आवश्यकता हेरिसकेपछि उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले — खाद्यबस्तुको उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्रीसम्मका सबै चरणमा खवरदारीको जरुरी देखाउँदै, मौसमी अनुगमनबाट बजार व्यवस्थापन गर्न झन जटिल भएको बताउनुभयो । सहरका बजारहरुमा ठाउँ—ठाउँमा सुधार गर्नु पर्ने, कति ठाउँमा नियमन गर्नु पर्ने अबस्था छ । उहाँले थप्दै भन्नुभयो — अब सचेतना पनि बढाउने र कानुन नमान्नेलाई कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउने योजना सुनाउनुभयो । बजार निरीक्षणका क्रममा चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघ र काठमाडौं चौपाया खरिद बिक्री कम्पनीका अधिकारीसँग पशु उत्पादन हुने क्षेत्र, ढुवानी गर्ने बिधि, ढुवानीकर्ताका दुःख—सुख, विक्री व्यवस्थापक र उपभोक्ताका सवालमा कुरा गरिएको थियो ।
काठमाडौंमा कुनै रोगी खसी बोका, भेडा च्याङ्ग्रा आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । पशु स्वास्थ्यका बिषयमा टिप्पणी गर्दै पशु सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. बंशी शर्माले — रोगी भेटिए ढुवानी हुनु अघि नै रोकिने गरेको बताउनुभयो । पशु ढुवानी गर्ने क्रममा बिरामी नदेखिएका तर बाटोमा आउँदा बिरामी परेका चौपायाको स्वास्थ्य अवस्था के हो भनेर काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने हो, महानिर्देशक शर्माको भनाइ थियो ।
कलंकीमा १३२ जना व्यापारी छन् । बिगत बर्षहरुमा काठमाडौंमा यदि ६५ हजार चौपाया आए भने कलंकीमा करीब ४० हजार आउँथे । तर अहिले अवस्था यस्तो छैन । चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापा भन्नुहुन्छ — अहिले ६५ हजार चौपाया आए भने कलंकीमा २५ हजार मात्र छिर्छन् । बाँकी बीचबाटोबाटै सहर पस्छन् । यसले खसीबो जाँच कलंकीमा गरेर मात्र पुग्ने देखिएन, उहाँको थप भनाइ छ — पसल पसलमा पुग्ने चौपायाको पनि कुरा गर्नुपर्छ । थापाको भनाइसँग सहमति जनाउँदै खरिद बिक्री कम्पनीका अध्यक्ष जनककुमार खड्का भन्नुहुन्छ — चौपायाको एकीकृत बजार बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा राम्रा र नराम्रा छुट््याउन पनि सजिलो हुन्छ । जवाफदेहिता पनि बढ्छ । अहिले केही समस्या देखियो भने कसलाई समाउने? एउटाले मात्र काम गर्दैन । एक ठाउँबाट मात्र पनि काम हुँदैन ।
महानगरले पशु सेवा बिभागसँग समन्वय गरेर अब स्वस्थ्य चौपायाको सिङ्मा हरियो र खान प्रयोग गर्न नमिल्ने खसीको सिङ्मा रातो रङ् लगाउनेछ । महानगरको कृषि तथा पशुसेवा बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ — यस पटक कलंकी, टुकुचा र गोङ्गवु बाइपास गरी ३ ठाउँमा खसी बजार लाग्नेछ । यहाँ आउने खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र बिक्री प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
पर्व लक्षित अनुगमनको क्रम निरन्तर चल्ने Previous Post
सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनसहित १६ वटा कार्यबिधि बिधायन समितिमा Next Post
चौपाया अनुगमनमा तीब्रता